El Capitan လိုင်စင်ကိုလက်ခံခြင်းဖြင့်သင်ဘာလုပ်မည်နည်း။ ငါက Mac ကပါ
El Capitan ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်သင်ဘာကတိသစ္စာပြုသလဲ။
ယရှေု Arjona Montalvo | | Mac OS X ကို, NOTICIAS, OS X ကိုအယ်လ် Capitan
လူအများကဲ့သို့ပင် OSX El Capitan software လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များတွင်တရားဝင် gibberish များကိုဖတ်ရန်ကျွန်ုပ်ပင်မနှောင့်နှေးခဲ့ပါ။ Robb Schecter ရှေ့နေနှင့်ဆော့ဖ်ဝဲရေးသူ, 'El Capitan' လိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုဖတ်ရှုဖို့စိတ်ရှည်ရှည်နဲ့ထိုင်ပြီးသင်၌မလိုအပ်သောအကန့်အသတ်များကိုရှင်းပြခဲ့သည်။ မင်းက El Capitan ကိုမပိုင်ဘူး သင် Mac App Store မှလည်ပတ်မှုစနစ်မိတ္တူတစ်ခုကိုကူးယူသောအခါ၎င်းသည်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည် သငျသညျ Apple ကမှ operating system ကိုချေးနေကြသည်။ ဆော့ဗ်ဝဲကိုဆယ်စုနှစ်များစွာဖြန့်ဝေခဲ့သောကြောင့်၎င်းသည်အံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ သို့သော်လည်းလူအများစုသည် El Capitan ၏ကန့်သတ်ချက်များကိုသတိပြုမိကြသည်ဟုမထင်ပါ။ ဥပမာ - Virtualization၊ စီးပွားရေးအသုံးပြုမှုနှင့်အခြားအရာများ။
ငါလိုင်စင်, အမှတ်တံဆိပ်နှင့်မူပိုင်ခွင့်ကိုကောင်းစွာနားလည်သဘောပေါက်နှင့်အတူရှေ့နေဖြစ်ကြောင်းထောက်ပြသင့်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းအနှစ် 20 အတွေ့အကြုံနှင့်အတူ software ကို developer ဖြစ်၏။ ဒါနဲ့ဒီစာချုပ်ကဘာလဲဆိုတာကိုကြည့်ဖို့လိုင်စင်ကိုငါချိုးလိုက်တယ်။ Robb Schecter ။
အတွင်း အရေးအပါဆုံး ဤ ၉ ခုကိုမီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
သင် El El Capitan ကို virtual machine နှစ်ခုနှင့်ကွန်ပျူတာတစ်လုံးတွင်သုံးနိုင်သည်။ သို့သော်ဤ virtual machine များသည်စီးပွားရေးအတွက်အသုံးမပြုနိူင်ပါ။
'El Capitan' နှင့်ပါ ၀ င်သောစာလုံးများကိုလည်းသင့်အားငှားရမ်းသည်။ သင်၎င်းတို့ကိုသင်မပိုင်။
'Photos' application ဖြင့်ပြုလုပ်သောဆလိုက်ရှိုးများကိုစီးပွားဖြစ်အသုံးမပြုပါ။
မည်သူမဆို၏တရားမဝင်မိတ္တူများဖြင့် 'El Capitan' ကိုသင်အသုံးမပြုပါ
Hackintosh တွင် El Capitan နှင့် Apple မဟုတ်သောဟာ့ဒ်ဝဲများသည်လုံးဝတရားမဝင်ပါ။
သင်သည် 'El Capitan' ရှိသောနျူကလီးယားစွမ်းအင်စက်ရုံကိုလည်ပတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုဆူဒန်သို့မပို့ဆောင်ရပေ။
သင်၏ Mac တွင်စီးပွားဖြစ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ဖန်တီးထားသော MPEG / H.264 / AVC ဗွီဒီယိုများကိုအသုံးပြုရန် encryption အတွက်နောက်ထပ်လိုင်စင်လိုအပ်သည်။
ရှင်းနေသည်မှာ Apple သည်ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်ချပေးခြင်းနှင့်မတူပါ။ အခြားကုမ္ပဏီအများစုလိုပဲ အက်ပဲလ်ဟာဒီတရား ၀ င်သဘောတူညီချက်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတယ်ရွေးချယ်ထားသည့်စကားလုံးတိုင်း \_ t တတ်နိုင်သမျှတာဝန်ယူမှုကိုကန့်သတ်ရန်ဂရုတစိုက်ပြုသောအမှုဖြစ်ပါတယ်။ Apple ၏လိုင်စင်သဘောတူညီချက်များ၏စည်းကမ်းချက်များနှင့်အခြေအနေများကိုတွေ့နိုင်သည် ဒီမှာ။ 'El Capitan' အတွက်နောက်ဆုံးလိုင်စင်သဘောတူညီချက်အပြည့်အစုံကို Apple ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် PDF စာရွက်စာတမ်းဖြင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » El Capitan ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်သဘောတူညီချက်ကိုလက်ခံခြင်းအားဖြင့်သင်ဘာကတိသစ္စာပြုသလဲ။
သို့သော် update ကိုကတည်းကပြန်ဖွင့်လို့မရပါဘူး
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုထင်ရှားစွာပြ !!!!!!! ငါတို့အကူအညီလိုတယ် !!!!
Hi-Francisco, မေးခွန်းတစ်ခု၊ Mac App Store မှသင် update လုပ်ခဲ့လား၊
Juan Luis Castillo နေရာချထားပုံ ဟုသူကပြောသည်
ငါခြစ်ရာကနေ installed အပေါင်းတို့နှင့်အဆင်ပြေခဲ့ပါတယ်။ ဒဏ်ငွေပိတ်
Juan Luis Castillo ကိုပြန်ပြောပါ